Igumbi leshelufa yeencwadi
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguJana
UJana ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
Igumbi elinebhedi ephindwe kabini lihlala kumgangatho wesibini wendlu yabucala. Igumbi lokuhlambela, igumbi lokufunda kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kwabelwana nelinye igumbi leendwendwe.
Indawo yokupaka ikufuphi nendlu.
Akutshaywa endlini (okanye egadini, nceda)
4.91 ·Izimvo eziyi-70
Indlu yethu ikwindawo efanelekileyo yokutyelela iLiberec kunye nokutyibilika e-Bedřichov. Kumgama wokuhamba ukusuka kwiYunivesithi yezobuGcisa yaseLiberec.
Qaphela: Oyena mmelwane wethu usondeleyo yiDyunivesithi yeZindlu. Idla ngokuba yindawo ezolileyo kwaye ezolileyo, ngaphandle kwamagama athile akhethekileyo kubafundi. Ukuqala kwesiqingatha sonyaka (malunga ne-16 Septemba) okanye ukuphela kwesiqingatha sonyaka kunokuba sisizathu sengxolo ethile. Nangona kunjalo, sineefestile zefestile ezintathu.
Kwakhona, iklabhu yomculo ingaphaya kwesitrato. Kudla ngokuzola, ngamanye amaxesha umculo ongavakaliyo unokuviwa.
Sihlala endlini, zikhululeke ukucela uncedo xa lufuneka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Liberec